Zakhele i-KDE ngokulandela lawa mavidiyo | Kusuka kuLinux
Uma ufuna ukuthola okwakamuva ngokweSoftware unezinketho ezimbili:
Ulinda umuntu akwenzele umsebenzi bese uhlanganisa noma upake lokho okudingayo
Noma okungcono okwamanje, uzenzela wena.
Kulokhu singabona lawa mavidiyo amabili enziwe ngonjiniyela we KDE:
Konke kulula, ngakho-ke azikho izaba 😀
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Yakha i-KDE yakho ngokukuqondisa kulawa mavidiyo
Ummm .. Ilanda amavidiyo ..
Sawubona u-Aaron Seigo usebenzisa i-openSUSE!? Bheka izinto ezitholwa umuntu! i-xD
Ngisanda kuvuselela i-KDE enguqulweni 4.10 isuka ku-4.9.98 futhi ayilethi izizinda ezi-animated; Othile angachaza ukuthi ngabe iletha leyo nketho ngokuzenzakalela noma uma kufanele uyinike amandla. Ngisebenzisa Kubuntu 12.10 x64
Akuziletheli. Bheka ukuphumula kwe-distro "dreamdesktop" yakho noma ngqo ku-KDE-Look.org/KDE-Apps.org
Amanye amavidiyo amahle kakhulu u-Elav 🙂 Njengawe, ngisebenzisa ukuhlolwa kwe-kde ne-debian. Ungangincoma ukuthi ngilandele amavidiyo futhi ngivuselele ku-KDE 4.10 noma ngihlale kokuvivinywayo? Ngiyayithanda i-debian, kepha angithandi isikhathi seqhwa xD
Njengamanje ngilungiselela konke ukufaka uKubuntu kuNetbook. Angikwazi ukulinda iDebian ukuthi ingeze i-KDE 4.10 Ekuhlolweni kwe-xDDDD .. Noma kunjalo, ungahlola kumshini obonakalayo noma okuthile, engeza lokhu kugcinwa:
I-KDE esesikhathini kunazo zonke ongayithola ku-Debian okwamanje.
Ngizozama futhi ngizokutshela ukuthi kuhamba kanjani: D. Yebo, leyo concidence xD, ngiyisebenzisa futhi kwi-netbook. Ake sibheke ukuthi ihamba ngokushesha okungatheni, i-athomu n270 iyesabeka.
Izingxabano eziningi kakhulu xD Kubukeka sengathi bekungeke kusebenze
Uff .. Ungathinti, ungathinti hahaha .. Yingakho ngiya eKubuntu
Engingakuthandi ngokubuntu ukuthi iza ilayishwe kakhulu. Uzositshela ukuthi saba kanjani isipiliyoni 🙂
Yebo, iza ilayishwe kepha ungahlala ukwengeza okuncane, ngokungeziwe, i-KDE 4.10 ithembisa ukusebenza okungcono .. yingakho ngihamba ..
Hawu, uDebian ojwayelekile! i-xD
Ku-Arch sebevele bafaka inguqulo 4.10 ye-KDE ... Manje ngiyayihlola futhi okwamanje konke kuhamba kahle. Ngibe nezinkinga ezimbalwa kuphela lapho ngivuselela futhi ngifuna ukuqala kabusha futhi bekungangivumeli, kepha ngemuva kokuqalisa kabusha i-terminal konke kusebenza kahle. Sizoqhubeka nokuhlola ukubona ukuthi kanjani. ps: I-Dreamdesktop isebenza kahle kule nguqulo.
Ngithuthukise ukusuka ku-4.98 kuya ku-4.10, anginazo izizinda ezi-animated. Sicela othile azi ukuthi angakwenza kanjani, ukuthi angalanda kuphi nokuthi amaphakheji alahlekile kanjani. Ngibona kakhulu.
UKonqui, Katie nabangane babo. Umbono we-mascot entsha ye-KDE
Umagazini we-TuxInfo # 55 uyatholakala